2 Korintiana 1 - Ny Baiboly
15Noho izany fahatokiana izany, tao aloha dia nikasa hankaty aminareo aho mba hahazoanareo soa indroa: 16hihazo any aminareo aho aloha rahefa mankany Masedonia, ary ho any aminareo indray rahefa miverina avy any, dia hianareo no hanatitra ahy any Jodea. 17Ka moa niovaova hevitra foana va aho raha nanao izany hevitra izany? Sa araka ny nofo no anaovako fikasana, ka dia misy "eny" sy "tsia" ato amiko? 18Araka ny maha-marina fa mahatoky Andriamanitra no tsy maha-"eny" sy "tsia" ny teninay taminareo. 19Satria ny Zanak'Andriamanitra dia Kristy Jesoa, izay notorinay sy Silvano ary Timote taminareo, tsy nisy "eny" sy "tsia", fa "eny" ihany no tao aminy. 20Fa na firy na firy fampanantenana avy amin'Andriamanitra, dia tao amin'i Jesoa ihany ny "eny", ka dia amin'ny alalany sy amin'ny asanay koa no anaovana "Amena", mba ho voninahitr'Andriamanitra. 21Ary tsy iza no mampaharitra anay mbaminareo ao amin'ny Kristy, fa Andriamanitra, izay naha-voahosotra antsika, 22sy nanisy tombo-kase antsika koa, ary nanome ny Fanahy ho antoka ao am-pontsika. 23Ary mianiana amin'ny fanahiko aho, sy miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona fa fitsitsiako anareo no mbola tsy nankanesako aty Korinto indray; 24tsy dia hoe hanao jàdona amin'ny finoanareo izahay (sanatria), fa miara-miasa hampandroso ny hafalianareo; raha ny finoana, dia efa miorina tsara hianareo. >